बैशाख ५ कालिकाेट । विप्लव नेतृत्वको नेकपाको नेपाल बन्दले जनजीवन कष्टकर बनेको छ। कर्णाली सहित देशभरी नै बन्दको प्रभावले आज गाडी चलेका छैनन् । बिहानैदेखि लामो तथा छोटो दूरीका गाडी नचल्दा यात्रुलाई गन्तब्यमा पुग्न समस्या भएको छ । यस्तै बजार […]
खुला रचना वाचन कार्यक्रम सम्पन्न
बैशाख ३, कालिकाेट । कालिकोट जिल्लाको खाँडाचक्र नगरपालिका १ प्रतिमा चोकमा खुला रचना वाचन कार्यक्रम आज सम्पन भएको छ । सुदुर कर्णाली साहित्य समाजको आयोजनामा सम्पन भएको रचना बाँचन कार्यक्रमा दुई दर्जन जतिले रचना बाचन गरेका हुन । रचना वाचन […]
पलाँतामा रेडियो पलाँता सुरु, आफ्नै स्वामित्वमा रेडियो सञ्चालन गर्ने कालिकोटको पहिलो स्थानिय तह
बैशाख ३, कालिकाेट । कालिकोटको पलाँता गाउँपालिकाले आफ्नै स्वामित्वमा एफ. एम. रेडियो सञ्चालनमा ल्याएको छ । गाउपालिकाको लगानीमा पलाँताले आफ्नै स्वामित्वको एफ एम रेडियो सोमबारबाट परीक्षण प्रसारणमा ल्याएको छ । रेडियोको स्टुडियोमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी रेडियो पलाँता एफ. एम. […]
आजबाट २०७६ साल सुरु, शुभकामना आदानप्रदान गरी नयाँ वर्ष मनाईँदै
बैशाख १, कालिकाेट । आजबाट नयाँ वर्ष २०७६ सुरु भएको छ । नयाँ वर्षको पहिलो दिन वैशाख १ गते, आज देश विदेशमा बस्ने नेपालीहरुले एकआपसमा शुभकामना आदानप्रदान गरी मनाइरहेका छन् । आज हरेक व्यक्तिले गत वर्ष गरेका कामको सफलता र […]
रास्कोटमा कर्मचारीको चरम अभाव, खाता सञचालन सम्म नहुदा योजना देखी सबै भुक्तानी रोकियो
चैत्र २८, कालिकाेट । कालिकोटकाे रास्कोट नगरपालिका कर्मचारी बिहिन वनेको छ । सरकारले कर्मचारीलाई समायोजन रोज्न आग्रह गरेपछि त्यहाँ रहेका सबै कर्मचारीले रास्कोट भन्दा वाहिरका स्थानिय तह र संघमा समायोजन रोजेका कारणले नगरपालिका कर्मचारी बिहिन वनेको हो । प्रमुख प्रशासकिय […]
चैत्र २७, कालिकोट । कालिकोटको नरहरीनाथ गाउपालिका वडा नं १ मा मानव अधिकार र अविभेद सम्वन्धि तालिम सम्पन्न भएको छ । स्थानिय स्तरका मुख्य अभियान्ता र अभिकर्ता परीचालनका लागी ३ दिने मानव अधिकार र अविभेद सम्वन्धि तालिम आज सम्पन भएको […]
नेकपा कालिकोटले भन्याे – “केपीका हरेक काम माथि प्रतिबन्ध लगाउने”
चैत २७, कालिकोट । कालिकोट जिल्लाको खिन गाबिस नेटामा आईतबार विप्लव नेतृत्व नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको बृहत जनप्रदशन सहित जनसभा सम्पन्न भएको छ । खिन गाबिस ईन्चाज पदम बमको अध्यक्षता, जिल्ला सेकक्रेटरी रणदिप को प्रमुख आतिथ्यतामा जनसभा सम्पन भएको हो । […]
आज विश्व स्वास्थ्य दिवस, कालिकाेटमा पनि स्वास्थ्य सन्देशमुलक कार्यक्रम गरी मनाईदै
चैत २४, कालिकाेट । आज विश्व स्वास्थ्य दिवस , स्वस्थ खानेकुरामा जोड दिँदै मनाईंदैछ । अस्वस्थ खानेकुराका कारण संसारमा हरेक वर्ष २० लाख मानिसको ज्यान जाने गरेको विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्लुएचओको अनुमान छ । ज्यान जानेमध्ये धेरै बालबालिका रहेको डब्लुएचओले […]
चैत्र २३, कालिकोट । कालिकोटमा शुक्रबार दिउँसो असिना पानि परेको छ । केहीदिनदेखि मौसममा बदली भइरहेको र शुक्रबार बिहानैदेखि पानी पर्ने संकेत देखिए पनि अपरान्नपछि भारी मात्रामा असिना पानी परेको हो । अचानक परेको असिना पानिले कालिकोटका बिभिन्न स्थानमा पाक्न […]
चैत्र २१, कालिकाेट । कालिकोटको दुर्गम गाउँ पलाता गाँउपालिका पुलाहा र वान्जडाका बासिन्दालाई ११ किलो नुन लिन अझै पनि सदरमुकाम मान्ममा धाउनुपर्ने बाध्यता छ । ११ किलो नुनको मूल्य ९९ रुपैयाँ रहे पनि जाँदा आउँदाको बाटो खर्चसमेत गर्दा कम्तीमा दुई […]